वाणीज्यतर्फ सदस्य पदका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद ढुंगाना ।
यही पुष १५ गतेबाट हुन लागिरहेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनको माहौलले अहिलेको चिसो मौसमलाई तताएको छ । ‘कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यवसाय, आर्थिक समृद्घि हामी सबैको आशय’ भन्ने नारा सहित संघको नेतृत्व लिनका लागि यतिबेदा दौडधुपमा लागिपरका छन् । निर्वाचनको आगामी कार्यकालका लागि वाणिज्य तर्फबाट सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेर कृष्णप्रसाद ढुङ्गाना पनि चुनावी प्रचार अभियानमा लागिपरेका छन् । आफ्नो उम्मेदवारी व्यवसायीको हकहितका लागि भएको बताउने हेटौंडा २ का ढुङ्गाना आफूले सदस्य पदमा निर्वाचित भएमा बोलेका वाचा पूरा गर्ने बताउँछन् । व्यवसायीका माझमा लोकप्रिय छवि बनाएका ढुङ्गाना व्यवसायका अलावा सामाजिक अभियन्ता पनि हुन् । उम्मेदवार ढुङ्गानासंग मध्यस्थता डटकमका लागि शिव चौलागाईले गरेको कुराकानी :
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको आगामी कार्यकालको वाणिज्य तर्फ सदस्य पदका लागि तपाईंको उम्मेदवारी चाँही किन ?
म लामो समयदेखि मकवानपुरको हेटौंडामा रहेर व्यवसाय गरिरहेको छु । व्यवसायीका सुख, दुःख सबै मलाई थाहा छ । मेरो उम्मेदवारी वाणिज्य तर्फबाट सदस्य पदका लागि हो । नुनदेखि सुन सम्म व्यवसाय गरेका वाणिज्यतर्फका व्यवसायीको सुख, दुःख सबै मलाई थाहा छ । यी व्यवसायीलाई कस्ता किसीमका समस्या आइपर्छन् भन्ने कुरा म आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा भोगेको छु । बेलाबेलामा व्यवसाय गर्दै गर्दाको बखतमा आइपरेका समस्याका समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि म संग केही सिकाईको भोगाई छन् । आगामी दिनमा म आफ्ना यी नै भोगाई अनूभूती बाँड्न चाहान्छु । र व्यवसायीमा आइपर्ने समस्यामा उनीसंगैको साथमा रहेर सुख, दुःख बाँड्न चाहान्छु । हुन त व्यवसायीलाई आइपरेका समस्याका बारेमा बोल्नका लागि यतिकै पनि सकिएला तर व्यवसायीहरुको छाता संस्था उद्योग वाणिज्य संघमा पुगेर आफ्ना कुरा राख्न सकियो भने जस्तोसुकै समस्या समाधानका लागि पनि सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँन सकिन्छ । यसैले पनि संघमा मेरो उम्मेदवारी व्यवसायी हकहितका लागि सशक्त रुपमा लाग्नकै लागि हो ।
यतिबेला तपाई चुनावी अभियानमा होमिनुभएको छ कस्तो प्रतिकृया पाइरहँनुभएको छ व्यवसायीको घर पसल पुगिरहँदा ?
यतिबेला मैले सबैको साथ पाएको छु । व्यवसायीको पसल तथा घर पुगेर मैले सदस्यमा उम्मेदवारी दिने कुरा सुनाउँदा उहाँहरुले मलाई सफलताको लागि कामना गरेका छन् । मैले पनि उहाँहरुको सुख, दुःखमा सङ्गै रहने प्रतिबद्दता व्यक्त गरेको छु । थोरै लगानी गरेर आत्मनिर्भर बनिरहेका व्यवसायीहरु, अनेक समस्यासंग जुध्न बाध्य बनिरहेका व्यवसायी लगायत सबै खालका व्यवसायीसंग भेटेर कुरा गर्दा म प्रति कता कता उहाँहरुले केही आशा राखे जस्तो महसुस पनि भयो मलाई । त्यो कस्तो भने व्यवसायमा अनेक समस्या छन्, चुनौती छन्, कतिखेर कस्तो खालको समस्या आइपर्ने हो, लगानी सुरक्षित हुने हो वा होइन भन्ने खालका अनेक चिन्तामा पनि कतिपय व्यवसायी साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको साथमा पुगेर समस्या बुझ्दा यस्ता अनेक समस्याका बिचमा आफ्नो व्यवसाय चलाइरहनु भएको मैले बुझेको छु । व्यवसायी साथीहरुकोमा चुनावी अभियानका क्रममा पनि पुगियो त्यो क्रममा उहाँहरुले मलाई आफ्नो प्रतिनिधीका रुपमा लिएको पाएको छु । आशा छ उहाँहरुले अहिले जुन प्रकारले आफ्नो सम्झनु भएको छ मलाई संघमा पुर्याएर काम गर्ने अवसर पनि उहाँहरुले दिनुहुनेछ ।
तपाईंको विचारमा उद्योग वाणिज्य संघ कस्तो संस्था हो ? जहाँ तपाईं आफू निर्वाचित हुन खोज्दै हुनुहुन्छ । चुनाव जितेपछि तपाईंका योजना चाँही के छन् ?
उद्योग वाणिज्य संघ यस्तो संस्था हो, जसले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि समन्वय कायम गर्दै विभिन्न खालका काम गर्न सक्दछ । नेपालमा उद्योग भित्राउने देखि नेपालका उत्पादनलाई बजार व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत उद्योग वाणिज्य संघले सहजीकरणको काम गर्न सक्दछ । मुलुक कृषिमा निर्भर भएकाले आर्थिक समृद्घिका लागि कृषिको विकासका लागि आवश्यक गोष्ठी, सेमिनार, तालिम लगायत विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय रुपमा गर्न सकिन्छ । व्यवसायीलाई पर्ने विभिन्न खालका समस्या सम्बोधनका लागि उद्योग वाणिज्य संघले राष्ट्रिय स्तरमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । व्यवसायीका विभिन्न खालका समस्या समाधानका लागि संघमार्फत राज्यसंग पहुँच राख्न सकिन्छ । विभिन्न राजनितीक दलसंग संघमार्फत सिधै आफ्ना सवाल राखेर ती सवालको सम्बोधन गर्नका लागि पहलकदमीको काम गर्न सकिन्छ । कसरी आर्थिक समृद्घि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोमा सारोकारवाला पक्षसंग आपसमा समन्वय गरेर लागिपर्न सकिन्छ । एउटा पाटो भनेको व्यवसायीका हकहितका पक्षमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउन सकिन्छ भने अर्को पाटो भनेको व्यवसायीलाई पनि अनुशासित,मर्यादित गराउनका लागि पनि सहजीकरण गर्न सकिन्छ । बेरोगारी समस्यामा रहेकालाई रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि व्यवसाय प्रोत्साहनमा सहजीकरण संघ मार्फत नै गर्न सकिन्छ । यस्तै, संघले विभिन्न सामाजिक कार्यमा पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । समाजमा पछि परेका विभिन्न समुदायलाई आवश्यक सहयोग गरी अगाडी ल्याउनका लागि विभिन्न खालका भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ । सामाजिक कार्य अन्तर्गत स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका काममा पनि केही न केही सहयोग गर्न सकिन्छ ।
चुनावमा तपाईको उम्मेदवारीको विषयमा कुरा गरिरहँदा तपाई एक व्यवसायी मात्र हुनुहुन्न सामाजिक रुपमा पनि उत्तिक्कै लागिपर्ने गर्नुहुन्छ । अन्तर्वार्ताको यो अवसरमा तपाईंले सामाजिक रुपमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिका पनि केही राख्न चाहानुहुन्छ की ?
व्यवसाय विहान हातमुख जोर्नका लागि हो,दैनिक जीवन चलाउनका लागि हो । एक हिसाबले हेर्ने हो भने यो पनि एउटा सेवा हो । दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने बस्तु तथा सेवा उपभोक्ताका लागि हामीले उपलब्ध गराइरहेका हुन्छौं । त्यसबाट हामीले केही नाफा त लिन्छौं होला त्यो संगै हामीले उपभोक्ता अथवा ग्राहकको आवश्यकता पनि पूर्ति गराउँन लागि परिरहेका हुन्छौं । यो केही कमाई गर्दै अरुको पनि दैनिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने समस्याको समाधानका लागि एउटा पुल बन्ने काम हो वास्तवमा । व्यवसायी भएपछि व्यापार अवस्य हुन्छ, नाफा घाटा पनि हुने नै भयो । तपाईले उठाउनुभएको मेरो सामाजिक सेवातर्फको अग्रसरताको जुन कुरा छ आज व्यवसायीका बिचमा राखिदिने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहान्छु ।
मकवानपुरका विभिन्न ठाउँमा कोरियन दाताबाट आर्थिक सहयोग ल्याई विद्यालय, छात्रावास निर्माण गर्ने कार्यमा पनि मैले अगुवाई गरे । मकवानपुरको हाडीखोला, बसामाडी, हेटौंडाका विभिन्न विद्यालय भवन निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक जुटाउने काममा मैले भूमिका खेले । यसका साथै सरिखेत पलासेमा छात्रावास निर्माण गर्नका लागि पनि मैले आर्थिक जुटाउने काममा सहजीकरण गर्न पाए । आफू अगुवा भएर पछि परेको समुदायको विकास गर्न पाउँदा पक्कै पनि खुशी लाग्दो रहेछ । मकवानपुर जिल्लाका अलावा बारा जिल्लाको तीन नम्बर पुल, नुवाकोटको जुरेमा पनि विद्यालय निर्माण गर्नका लागि मेरो अगुवाईमा कोरियादेखि दाताहरुको मन तित्दै आर्थिक जुटाउने काम भयो । ग्लोबल एजुकेशन फर अल फाउन्डेशन नामक संस्थामार्फत मकवानपुर र मकवानपुर बाहिरका जिल्लामा विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय भवन निर्माण गर्नका लागि सहयोग पुर्यायौं । आफूले गरेको सामाजिक कार्य सम्झँदा पनि यतिखेर मलाई आनन्द अनुभूती भइरहेको छ । यसका साथै नेपालमा गएको विनासकारी भूकम्पका बेलामा पनि विशेष गरी सहयोगी मन भएको कोरियनहरुको साथ सहयोगमा मकवानपुरका दुर्गम गाउँगाउँ जहाँ भूकम्पका पीडामा प्रभावितहरु छटपटाइरहेका थिए त्यहाँ पुग्ने काम गरियो । नामटार, फापरबारी लगायत क्षेत्रका भूकम्पका प्रभावितको घरमा पुगेर उनीहरुको दुःखमा हामी पनि संगै छौं भन्ने काम गरियो । यसका लागि उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने औषधी, त्रिपाल, जस्तापाता, त्रिपाल लगायत सहयोग गरियो । नामटारमा स्वास्थ शिविर नै सञ्चालन गरियो जहाँ हामीले ४ लाख ४० हजार रुपिया बराबरको औषधी निःशुल्क वितरणको काम पनि गरेका थियौं ।
अहिले झट्ट सम्झेको यिनै कुराहरु हुन् । मानवीय जीवनमा अरुको दुःखमा साथ दिने सहयोग गर्ने धेरैको भावना हुन्छ त्यो भावना म मा पनि छ । त्यस्ता सामाजिक काम गर्न मलाई औधी रुची पनि लाग्छ । व्यवसायीका रुपमा आफ्नो जीवन गुजार्दै गर्दा समाजमा देखा परेका विभिन्न समस्या समाधानका लागि मैले आफू नागरिक भएको हैसियतमा पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छु । यसका साथै, म मिडिया क्षेत्रको पनि विकास होस्, मिडियाले धेरै आवाज विहीनहरुको आवाज बोल्छ भनेर मध्यस्थता साप्ताहिक र मध्यस्थता डटकममा पनि आबद्घ छु । मिडियाका क्षेत्रबाट पनि विभिन्न सामाजिक सरोकारवालामा लागिपर्नका लागि म साथीहरुलाई सल्लाह सुझाव दिने गरेको छु ।
यि थोरै कामहरु गर्दा मलाई सामाजिक रुपमा ठूलो सफलता मिल्ने काम गरे भन्ने लाग्दैन तर पनि मैले व्यवसायिक रुपमा लागेर जे आर्जन गरिरहेको छु सामाजिक उत्तरदायित्व पनि केही न केही रुपमा पूरा गर्न खोजिरहेको छु भन्ने लाग्छ । अझै पनि समयले साथ दिएसम्म सामाजिक कार्यमा पनि म लागिपर्नेछु ।
चुनाव जित्नेमा चाँही तपाईं कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
चुनाव जित्छु भन्नेमा म पूर्ण रुपमा विश्वस्त छु । मेरो आनीबानी सबै सामु छर्लङ्ग छ । कुनै कुरा लुकाउनु परेको छैन । हिजो दुःखका दिनमा मैले कसरी कुन खालको सङ्घर्ष गर्दै आए भन्ने कुरा मलाई नजिकबाट चिन्नेहरुलाई सोध्दा पनि थाहा हुने कुरा हो । सडकमा बसेर, सडकमा दौडेर व्यापार गर्दा देखि व्यवसायिक रुपमा सटरमा पसल चलाउँदासम्मको अनुभव म संग छ । सङ्घर्षबाटै यहाँसम्म आइपुगेको व्यक्तिलाई संघमा जिताउँनुपर्छ भनेर साथीहरुले मलाई हौसला पनि दिइरहनुभएको छ । चुनाव आइसकेको छ, विश्वास छ अवस्य चुनाव जित्नेछु ।
अन्त्यमा, चुनावमा भोट हाल्ने अधिकार भएका मतदाताहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
यो अवसरमा म उहाँहरुलाई वाणिज्य तर्फको सदस्यमा मलाई जिताउँनका लागि भोटको आशा राख्दछु । उहाँहरुले मलाई जिताएर पठाउँदा उहाँहरुको भावना बाहिर गएर कुनै पनि प्रकारको काम गर्ने छैन । मलाई जिताउँने सहकर्मीहरुको साथ सल्लाहमै संघमा म व्यवसायीको हकहितमा लागिपर्नेछु । संघमार्फत गर्न सकिने काम, अवसर, अन्य आवश्यक सबै प्रकारका सहजीकरणका लागि म तयार रहनेछु । म कृष्णप्रसाद ढुङ्गाना वाणिज्यतर्फको सदस्यको उम्मेदवारलाई जिताउँन यहाँहरु सबैले साथ सहयोग दिनुहुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु ।